Loluphi uhlobo lwerhafu oluyinzuzo lwe-MTS lowama-2016? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Loluphi uhlobo lwerhafu oluyinzuzo lwe-MTS lowama-2016?
Ngokwasemthethweni, ekupheleni kuka-2015, enye yezona zinto zinenzuzo kakhulu kwi-MTS (quot; indawo yengingqi yekhaya;) yi-Smart Mini - umrhumo wenyanga ubhengezwe kwii-ruble ezingama-200. Nangona kunjalo, le ntlawulo ibonakala ngathi yexabiso eliphantsi inezingqinamba - ukutshintsha kwexabiso lentlawulo kwixesha elizayo, iphakheji ye-Intanethi ye-GB esezantsi yokuba abasebenzisi abasebenzayo bangakhawuleza ukugqitha, bambalwa abaqwalaselayo xa kudityaniswa-wonke umntu ujonga kuphela ii-ruble ezingama-200 ngenyanga! Kwaye ngaphandle kwemeko ukutsalwa ngumda ongenamda kwi-MTS-ubunokuthetha ngaphezulu, oku kuyingenelo ngokwenene.
Ngoku bonke abaqhubi beeselfowuni banikezela uninzi lwamaxabiso e-smartphones. Ngaphandle kweminxeba eqhelekileyo kunye neSMS, inkonzo ikwabandakanya uluhlu lwamaxabiso e-intanethi.
Wonke umntu ukhetha iirhafu kuxhomekeke kwiimfuno zabo.
Kwiwebhusayithi esemthethweni ye-MTS, ungaziqhelanisa nazo zonke izicwangciso zerhafu kunye neemeko zabo.
Umda werhafu kwi-MTS wahluke ngokupheleleyo. Unokukhetha uluhlu lwamaxabiso afanelekileyo usebenzisa umsebenzi wokukhetha iRhafu kwiwebhusayithi yomqhubi. Ukwenza oku, vele ugcwalise iphepha lemibuzo kunye nenkqubo ngokwayo iya kukhetha eyona ilungileyo, esekwe kwiimfuno zakho kunye neminqweno yakho.
Ngokwam, andichazanga ngaphezulu kwee-ruble ezi-5 ngenyanga kunxibelelwano lweselula phantse iminyaka emibini. Intlawulo yam yeSuper MTS ngaphandle komrhumo wenyanga. I-MTS ibonelela yonke imihla imizuzu engama-20 yeminxeba yasimahla kwabanye ababhalisi bomatshini ofanayo. Kwenzekile ukuba phantse bonke abafowunelwa bam bangababhalisi be-MTS, ngenxa yoko ndisebenzisa iinkonzo zonxibelelwano phantse mahala.
Kulabo bathetha kakhulu, ukunxibelelana nababhalisile abaqhubi abahlukeneyo, ndingakucebisa ukuba ujonge amaxabiso e-Smart kunye ne-Smart mini. Kwaye ungakulibali ukunxibelelana nenkqubo yebhonasi, ngoncedo lwayo unokugcina imali elungileyo.
Kungekudala kwakumgca woluhlu lwexabiso Qu; Smartquot; Umqhubi weselula we-MTS unexabiso elitsha- i-Smart Unlimited. Iphakheji ibandakanya-i-Intanethi engenamkhawulo, ukubiza iinombolo ze-MTS kwingingqi yakho nakwii-MTS kulo lonke iRussia nge-ruble ezili-12,9 kuphela. ngemini, ngama-200 e-SMS kunye nemizuzu engama-200 yokuncokola.
Le yinyanga yokuqala, ke amaxabiso erhafu aya kunyuka aye kwi-ruble ezingama-20 ngosuku.
Ukutshintshela kwi-Smart Unlimited kungenziwa ngokutsala umnxeba * 111 * 3888 # (umnxeba) kwifowuni yakho.
Iinkcukacha ezithe kratya kwiwebhusayithi esemthethweni ye-MTS.
Konke kuxhomekeke kwinto oyithandayo kunye nento oyifunayo.
Kukho uluhlu lweerhafu ezahlukeneyo neziluncedo onokuzithanda.
I-Super MTS -Ndisebenzisa le ntlawulo-yinto elula kakhulu
Uya kwaziswa ngakumbi ngerhafu ekwi-MTS yonxibelelwano.
Into ekufuneka uyikhumbule kukuba nayiphi na irhafu ibiza imali.
Ke cinga ngaphambi kokuba udibanise nayiphi na intlawulo ngokwakho.
Abanye bakhetha uluhlu lwamaxabiso I-Smart Mini -sisisikhundla sokuba yinto elungileyo nayo
Ngo-2016, ndihamba nenkonzo ye-Smart Nonstop yamaxabiso asimahla kwiindleko zonxibelelwano, kunye nomrhumo wenyanga wokurhuma wee-ruble ezingama-350. Kwingingqi yethu kukho ii-gigabytes ezisi-7 ze-Intanethi ngesantya esingenamda inyanga (usuku) kwaye zingenamkhawulo ngesantya esingenamda ubusuku ngabunye.
Kodwa ngesizathu esithile, ukugcwala kwabantu bemihla ngemihla inyuka rhoqo ngenyanga (kwinyanga yokuqala banikela nge-7 GB ngenyanga, kwinyanga yesibini nge-14 GB kwaye kwinyanga yesithathu i-SMS ifika apho isitsho ukuba yintoni ekhoyo kum, i-21 GB yendlela), kodwa indifanela ngokugqibeleleyo.
nanku umfanekiso namhlanje kunye nokugcwala kwabantu:
Ukuba oku kuyaqhubeka ngakumbi, ukuphela kuka-2016, nge-Dwarha, malunga ne-100 GB ngeke kunikezwe inyanga.
Ndicebisa wonke umntu ngeli nqanaba lifanelekileyo!
Olona lwabiwo mali lwenzuzo ye-MTS zilungiselelwe iimfuno zakho.
Umzekelo, i-Smart mini yanele kum, kuba ndithetha kancinci, kodwa iyabiza.
Abanye bakhetha i-Super MTS kuba banxibelelana kakhulu.
Yiya kwiakhawunti yakho kwaye ubone ukuba yeyiphi inzuzo engaphezulu kuwe, iya kuthatha ixesha elingaphantsi kweyure.
Ukukhetha eyona rhafu ifanelekileyo kumqhubi we-MTS, kuya kufuneka uye kwiwebhusayithi yakhe esemthethweni kwaye ubone ukubonelelwa.
Wonke umntu uneemfuno ezahlukileyo kwaye uluhlu lwamaxabiso aluncedo kolunye, alunakuba loluncedo komnye.
Ndisebenzisa uluhlu lweerhafu; I-Super MTSquot ;, indifanele ngokupheleleyo, unyana wam uqhagamshele i-Smart mini, kuba unomdla kwi-Intanethi (ichanekile ngakumbi kwitrafiki kule ntlawulo).
Olona xabiso lubalaseleyo kumgca ophethe i-MTS yi-SMART NONSTOP. Kwingingqi yam (iRostov-on-Don kunye neMimandla yeRostov), ​​intlawulo enyanzelekileyo ngama-ruble angama-350 ngenyanga. Kule mali ufumana i-intanethi engenamkhawulo ebusuku kunye ne-10GB ye-Intanethi ngexesha lasemini.
Iminxeba engenamda kwi-MTS kulo lonke elaseRussia. Ukutshintshela kolu luhlu lwamaxabiso kusimahla kubabhalisi be-MTS, iinkcukacha ezingakumbi apha.
I-Super MTS ikwayixabiso elihle kunye nengeniso. Wonke umntu unokuzikhethela iirhafu, ezifanelekileyo ngakumbi kwiminqweno yabo kunye namathuba kwiwebhusayithi esemthethweni.
Eyona ntlawulo iluncedo kakhulu yiSuperMts.Le ntlawulo inayo yonke into ukusuka kwiifowuni ezingabizi ukuya kwi-Intanethi, onokuthi uqhagamshele ngokwakho. Ngokwam, uyandifanela.
I-Smart mini nayo ilungile, i-Intanethi ikhawuleza ngokukhawuleza.
I-MTS yenye yezona zinto zaziwayo ezisebenzayo kunye nam ngokomgangatho ophezulu.
Uninzi lwabantu lufuna ukwazi ukuba loluphi uluhlu lwerhafu oluyeyona nzuzo, kwaye kum ngamaxabiso amatsha. La maxabiso ayahluka kwinani lemizuzu, ii-sms kunye nee-gigabytes ze-intanethi. Kufuneka ukhethe enye oyifunayo kwaye ilungele wena.
Kunyaka olandelayo we-2016, enye yeyona ntlawulo ilungileyo yeyona ntelekelelo yexabiso; i-Smartquot; umgca weerhafu, oquka amanani amaxabiso amane (i-mini, i-nonstop, smart + kunye ne-smart).
Amaxabiso anengqondo ngokwabo - ukusuka kwi-ruble ezingama-200 ngexabiso elincinci, ukuya kwi-ruble ezingama-900 kweyona nto ibiza kakhulu.
Ndivumelana nombhali weyona mpendulo ilungileyo, isicwangciso seerhafu esiyi-Smart NonStop. Kuyinyani, ixabiso alikho ngama-350, kodwa lifikelela kwii-ruble ezingama-500, kodwa lifikelela kwi-gigabytes ezili-10 zokugcwala kwi-Intanethi. Kwaye, iifowuni ezingenamda kwiinombolo ze-MTS kwingingqi yasekhaya.
Imibuzo ye-22 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,298.